Ogaden News Agency (ONA) – Wafti Kasocda OYSU Finland oo Shir Caalami ah Kaqaybgalay.
Wafti Kasocda OYSU Finland oo Shir Caalami ah Kaqaybgalay.
Waxaa shalay ooy taariikhdu ahayd 2/8/2014 lagu qabtay wadanka Finland shir heer sare ah ooy kaqaybgaleen ururka Dhalinyarada iyo Ardayda Somalida Ogadenya ee wadanka Finland. Shirkan oo ahaa mid looga wada arinsanayo udiyaargaraw kusaabsan Bandhig Faneed ladoonayo in lagu qabto caasimada wadanka Finland ee Helsink.
Waftiga OYSU-Finland ayaa kulankan waxay laqaateen xubno iyo masuuliin kala duwan oo iskugu jira Ajaanib iyo Finland. Shirkan ayaa wuxuu kadhacay magaalada Helsink. Kulankan ayaa loogu gogol xaadhayay munaasabad loogu magacan daray AFRICAN CULTURAL EVENING. Munaasabadan Bandhig Faneedkan ayaa lagaga hadli doonaa qadiyada Somalida Ogadenya.
Waxaa kaloo kasoo qaybgali doono bandhigan oo sirasmi ah loogu casuumay marti sharaf heer sare ah oo kasocda wadanka Finland kuwaasoo magac iyo maamuus wayn kuleh wadanka. Waxaa habeenkaas dadwaynaha maaweelin doona OYSU-Finland oo idiin soobandhigi doona ciyaarihii aad ooga barateen ee Hidaha iyo Dhaqanka iyo waliba ciyaaro kale ood aad ooga heli doontaan. Hadaba yaan lamoogaanin kasoo qaybgalka munaasabadan qiimaha badan.
Waxaad hoos kaheli kartaan faah faahinta taariikhda, wakhtiga iyo goobta bandhiga lagu qaban doono haduu eebuhu yiraahdo.